रमेश भुजेलको निर्देशनमा 'सपनी देख्नेभए' सार्बजनिक
मुग्लानी खबर संवाददाता सोमवार, असार २८, २०७८
रमेश भुजेलको निर्देशनमा नयाँ नेपाली लोकदोहोरी गीत 'सपनी देख्नेभए' सार्बजनिक भएको छ ।
कतारका रमणीय दृश्यहरुमा छायांकन गरिएको गीतमा चर्चित गायक कुलेन्द्र बिस्वकर्मा र देबि घर्तिले स्वर भरेका छ्न ।
गीतमा दोहा कतारमा चलेका मोड्ल नवराज सपुत र मालति न्यैपानेको अभिनय देख्न सकिन्छ । भने क्यामरामा बिरेन मादेन, शब्द मोहन बिरही (सिपालि ) /अर्जुन बिरही र थेगोमा बलेन्द्र सुनारले गरेका छ्न ।
त्येस्तै गीतको लय बसन्त थापाले गरेका हुन भने सम्पादन रोसन धितालको रहेको भिडियोलाई बुर्तिबाङ म्युजिक प्रा : लिको युटुव च्यानल मार्फत प्रसारण गरिएको हो ।
गीतमा सपनीमा देखिएको माया पिरतीलाई दुई जोडि मार्फत बिपनि बनेर उतार्न खोजिएको छ ।
यश गीतमा निर्देशक तथा गायक रमेश भुजेलको छोटो जिवनी ।
रमेश भुजेल : सानैदेखि गित संगित प्रती लगाव राख्ने गर्दथे ! गाउँमा भुजेललाइ सबैले माया गर्थे, रमेश भनेपछि ७०/ ८० बर्से वृद्धहरु पनि हुरुक्कै हुन्थे, पुजा पाठ बिहे भोज भतेरमा रमाइलो गर्न पछि नपर्ने रमेश त्येहा उन्को सारै खोजी हुन्थ्यो, गीत गाउन, नाच्न सिपालु उनी आर्थिक अवस्थाको कारण मनले नचाहादा नचाहादै बिदेशीनु बाध्य बने ।
नेपालमै कलाकार बन्छु,केही गर्छु भनेर लागीपरेका रमेश आर्थिकको समस्याले पेलेपछी उन्को सपनामा ब्रेक लाग्यो र, ऋणको भारी बोकि मलेसिया पसे ! तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझै उनी त्येहा हुने नेपाली कार्यक्रममा गीत गाउने, नाच्ने रमालो गर्न लागीपरे नेपाली समुदाय माझ केही महिनामै परिचीतभए । र उन्लाइ चिनाउन कलाकार क्षेत्रमा बाटो देखादिने देवान दुखि मगर भेष राज बस्नेतलाई सम्झिने बताउन्छ्न ।
पछि रोजगारीको सिलसिलामा कतार आए, यहाँ आएपछि पनि नेपाली गीत सङ्गितलाइ माया गर्न थाले, पहिले नाच्ने गाउने गर्ने रमेश अहिले निर्देशनमा रमाइरहेका छन । उन्ले निर्देशन गरेको "कतार दोहामा" भन्ने गितले नेपाली समुदाय माझ राम्रो चर्चा कमायको बताउन्छ्न । भुजेलले नेपालका चलेका गायक गायिका हरुले गायका गित हरुको निर्देशन गरेका छन्न भने यो तिजभन्दा पहिले लगातार4गित को भिडियो बजारमा आउदै गरेको पनि बताए ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, असार २८, २०७८, १०:२६:००
शशिकला मोक्तान र कुमार योञ्जनको सुमधुर स्वरमा‘तिम्रो साथ रहनेछु’म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित)
अर्जुन,सुस्मा र सर्मिलाको आवाजमा तीज गीत "सानी”बजारमा
‘स्यानी माया’लाई तिन दिनमै आठ लाख भ्यूज
गायक तथा निर्देशक रमेश भुजेलको 'चढे जहाज झरे खाडी' बजारमा